Izu a, m na-enyocha saịtị ndị ahịa na-eji ngwaọrụ webmaster. Otu n'ime ihe ọjọọ ndị ọ chọpụtara bụ na ọtụtụ n'ime njikọ dị na saịtị ahụ nwere koodu mkpọsa dị na ha. Nke a dị mma nye onye ahịa ahụ, ha nwere ike soro onye ọ bụla na-akpọ-to-action (CTA) na saịtị ahụ niile. Ọ bụghị nnukwu ihe maka njikarịcha Ngini Nchọgharị.
Nsogbu bụ na Google (engine engine) amaghị ihe koodu mkpọsa bụ. Naanị ịkọwapụta otu adreesị na saịtị gị dị ka URL dị iche iche. Yabụ ọ bụrụ na m nwere CTA na saịtị m na m gbanwere oge niile iji nwalee ma hụ nke na-adọta mgbanwe ndị ọzọ, enwere m ike ịkwụsị:
Nke ahụ bụ n'ezie otu ibe, mana Google na-ahụ URL atọ dị iche iche. Njikọ nke ụlọ gị dị mkpa n'ihi na ọ na-agwa injin nchọ ihe ọdịnaya dị mkpa n'ime saịtị gị. Dịka, ibe ụlọ gị na ọdịnaya 1 jikọtara na peeji nke ụlọ gị dị oke arọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ koodu mkpọsa ejirila oge niile, Google na-ahụ njikọ dị iche iche yana, ikekwe, ọ bụghị ịtụle nke ọ bụla dị ka o kwesiri.
Dynamic parameters (dịka ọmụmaatụ, NJ oge, isi mmalite, ma ọ bụ asụsụ) na URL gị nwere ike ime ka ọtụtụ URL dị iche iche na-arụtụ aka na otu ọdịnaya. Ọmụmaatụ, http://www.example.com/dresses'sid=12395923 nwere ike rụtụ aka n'otu ọdịnaya dị ka http://www.example.com/dresses. Can nwere ike ịkọwapụta ma ịchọrọ Google ileghara ihe ruru 15 kpọmkwem ederede anya na URL gị. Nke a nwere ike ime ka ịbawanye rụọ ọrụ nke ọma na obere URLs abụọ, ma na-enyere aka hụ na echekwara ozi ịchọrọ. (Mara: Ọ bụ ezie na Google na-atụnye aro n'uche, anyị anaghị ekwe nkwa na anyị ga-eso ha n'ọnọdụ ọ bụla.)
Ihe ngwọta ọzọ bụ iji hụ Njikọ Canonical edozila. Maka ọtụtụ usoro njikwa ọdịnaya, nke a bụ ndabara ugbu a. Ọ bụrụ n’inweghị usoro njikọ canonical dị na saịtị gị, kpọtụrụ onye na-eweta CMS ma ọ bụ webmaster gị iji chọpụta ihe kpatara ya. Nke a bụ obere vidiyo na njikọ Canonical, nke ndị isi nyocha niile nabatara ugbu a.
Jide n'aka na ị ga - eme ha abụọ - ị nweghị ike ịkpachara anya, usoro a agaghị emebiri gị ihe ọ bụla!